हामीले हिम्मत हारेका छैनौंः बाबुराम
दमौली । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले चुनावमा हार भए पनि आफूहरुले हरेश नखाएको बताएका छन् । दमौलीमा पार्टी कार्यकर्तासँग कुराकानी गर्दै उनले चुनावी परिणामले सानो देखिए पनि नयाँ विचारधाराका हिसाबले पार्टीको आवश्यकताध सबैले महसुस गरेको उनले बताए । ‘चुनावमा सानो देखियो भन्दैमा हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने,‘जनताले वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेका छन् ।’
उनले आफूहरुमा केही कमजोरी भएका कारण जनताले नयाँ शक्तिलाई विश्वास गर्न नसकेको स्विकारे । ‘हामीले आफूलाई भरपर्दो तागतको रुपमा विकास गर्न नसकेकाले जनताले पुरानै शक्तिलाई बाध्य भएर मत दिए,’ उनले भने । उनले यी सबै अवस्थालाई समीक्षा गरेर पार्टी झन गतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एक वर्षमै अवस्था फरक
डा. भट्टराईले अबको पार्टीको समय अविधेशनको भएको भन्दै यसबीचमा सबै तहमा संगठन बलियो पारिने बताए । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म संगठन बलियो पार्ने योजना उनले सुनाए । ‘वैचारिक ढंगले प्रष्ट भएर संगठन विस्तारमा हामी अघि बढ्नेछौं,’ उनले भने ।
‘हिम्मत नहारीकन हामी संगठन सुदृढिकरणमा खट्ने हो भने एक वर्षमै अवस्था फरक हुन सक्छ,’ उनले भने । अहिले वामपन्थी भनिनेहरुको दबदबा देखिए पनि आफूहरु साँच्चिको समाजवादका पक्षमा भएकाले जनताले विश्वास गर्ने उनको भनाई छ ।
आर्थिक व्यवस्थापन गरेर पार्टीलाई समय
डाक्टर भट्टराईले पार्टीलाई गति दिनका लागि कार्यकर्ताको साथ जरुरी रहेको भन्दै आफ्नो गुजारा गर्दै बचेको समय पार्टीलाई दिन आग्रह गरे । ‘हामीले आफ्नो गुजाराका लागि आर्थिक व्यवस्थापन गरेर पार्टीलाई समय दिनु जरुरी छ,’ उनले भने,‘केही कार्यकर्ता आवश्यकताअनुसार पूर्णकालिन हुनेछन् ।’ उनले पार्टीको प्राथमिकता अब आर्थिक समृद्धि प्रधान भएकाले सोही अनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘संघर्ष सकिएको होइन तर आर्थिक मुद्दा प्रधान हो र राजनीतिक मुद्दा सहायक,’ उनले भने,‘विकास र समृद्धिलाई टेकेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।’ उनले यसका लागि अभियान नै चलाएर जनतासँग जोडिने बताए ।